Vadzidzi Gumi VepaUniversity of Zimbawe Vosungwa Mushure Mekuratidzira
Mapurisa nhasi arova zvakaipisisa nekusunga vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vange vachiratidzira kusafara kwavo nemari dzechikoro dzakawedzerwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi vati vange vasati vapirwa nezvenyaya iyi.
Gweta revadzidzi ava Amai Nontokozo Dube Tachiona vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vadzidzi gumi vasungwa uye vaendeswa kuHarare Central Police Station kwavari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo we Maintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA.
Munyori anoona nezvemitemo musangano rinomiririra vadzidzi munyika yose reZimbabwe National Students Union VaBoris Tadiwanashe Muguti vaudza Studio 7 kuti kunyangwe vakasungwa havasi kuzodududza panyaya yekuti mari dzechikoro dzidzikiswe.
Hurukuro naVaBoris Tadiwanashe Muguti